यसरी लगाइँदै छ चीनबाट आएको खोप
काठमाडौं । चीनमा एमबीबीएस चौथो वर्षको अन्तिम सेमेस्टर पढ्दै गरेका सर्लाहीका पंकजप्रसाद साह गत डिसेम्बरमा नेपाल फर्किए । सन् २०२० मार्चमा चीन फर्कने उनको योजना थियो । तर, कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै गएपछि साह नेपालमै रोकिए ।
अनलाइनबाट कक्षा लिइरहेको भए पनि कहिले पढाइ पूरा गरेर इन्टर्नसिप सक्ने भन्नेबारे उनलाई वर्षैभरि चिन्ता लागिरह्यो । अधुरो पढाइका कारण साहजस्ता धेरै विद्यार्थीको एक वर्ष अन्योलमै बित्यो ।
एमबीबीएस पूरा गरेर चीनमै इन्टर्नसीप गरिरहेका विद्यार्थी महामारीका कारण चीन फर्कन नपाउँदा मारमा परेका छन् । चीनबाटै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएपछि अब पढाइमा फर्कने बाटो खुलेको उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले आजदेखि चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका तथा जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी, अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी, होटेल, ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधि, फलफूल, तरकारी व्यापारी र प्राध्यापकहरुलाई खोप दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको परिचयपत्र, पासपोर्ट, व्यापारीको हकमा आबद्ध कम्पनीको परिचयपत्रका आधारमा खोप दिइएको छ ।
आज पहिलो दिन विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइएको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले बताए । चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको आठ लाख डोज खोप चार लाख नागरिकलाई दिइनेछ । यो चरणको खोप अभियान कति दिनसम्म चल्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म नतोकेको पनि खड्काले बताए ।
डेरी, फलफूल र तरकारी व्यवसायीलाई के आधारमा दिइन्छ खोप ?
अहिले चलिरहेको खोप अभियानमा तरकारी तथा फलफूलसँगै डेरी व्यवसायीलाई पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिइने भएको छ । यी क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीले आफू आबद्ध संघ–संगठन, समितिले दिएको परिचयपत्रका आधारमा खोप पाउनेछन् । परिचयपत्र नभएका व्यवसायीलाई सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रको व्यवसायी समितिले लिखित सिफारिस गरेको आधारमा पनि खोप दिइने स्वास्थ्य प्रमुख खड्काले बताए ।
कस्तो हो भेरोसेल खोप ?
नेपालमा आजदेखि लगाइएको कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप चीनको सरकारी कम्पनी सिनोर्फामले उत्पादन गरेको हो । यो खोप एकपटकमा ०.५ एमएलका दरले दुईपटक तीन हप्ताको फरकमा लगाइन्छ । भेरोसेलको पहिलो चरणको परीक्षण चीनमा २०२० जनवरी पहिलो सातादेखि जुनसम्म गरिएको थियो । जुलाइ महिनामा यसको दोस्रो चरणको परीक्षण यूएईका विभिन्न राज्यमा गरिएको थियो भने तेस्रो चरणको परीक्षण अगस्टमा मोरक्को र पेरुका नागरिकमा गरिएको थियो । अन्तिम चरणको परीक्षणमा ७९.३४ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको थियो । चीनसहित अहिले यो खोप विश्वका विभिन्न १७ देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा इसाइ (क्रिश्चियन) धर्मावलम्बीको शव गाड्ने र पक्की चिहान... ३६ मिनेट पहिले
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण अलमलमा परेका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जात्राहरू यसवर्ष स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मनाइँदैछन् । यसैक्रममा काठमाडौंको ठूलो... ४० मिनेट पहिले